VLC bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu mgbasa ozi ọkpụkpọ na nnukwu uru nke ya bụ na ọ bụ na-emeghe isi software. Developers na-emelite ya mgbe nile iji mee ka ọ ọbụna mma. Ebe a dị ole na ole Atụmatụ i nwere mara banyere VLC maka iOS.
Nbudata na wụnye VLC na ihe iOS ngwaọrụ
Ị nwere ike ibudata na wụnye software si dị iche iche na isi mmalite. Ebe a na-atọ kasị pụrụ ịdabere na isi mmalite maka nbudata na software:
Ọ bụ ukara saịtị nke VLC media ọkpụkpọ. Ọ bụ ihe kasị pụrụ ịdabere na isi iyi maka nbudata VLC n'ihi na gị iOS ngwaọrụ
Ọ bụ ihe ọzọ a pụrụ ịdabere na isi iyi maka nbudata VLC. Ị nwere ike ozugbo gaa Apple Store eji gị Apple ID na ibudata na software
Download.com bụ a na-ewu ewu na saịtị na-enye iche iche nke software. Ị na-ele ndị reviews n'ihu gị ibudata software.
Installation bụ nnọọ niile i nwere ime bụ na-aga n'elu isi mmalite, ibudata executable faịlụ, na imeghe ya. Dị nnọọ na-aga site nwụnye usoro, nke dị mfe na-eso. Ị nwere ike na-agba ọsọ software ozugbo ọ arụnyere.
VLC video ọkpụkpọ maka iOS mberede nwere dịghị ụda, otú e si edozi?
Nke a bụ otu n'ime ihe ndị kasị nsogbu ọtụtụ ọrụ na-eche ihu na-eji VLC ma ọ nwere ike na-edozi mfe. Otú ọ dị, tupu ị na-eme ihe banyere VLC biko ego ma ọ bụrụ na nna ukwu ụda nke na kọmputa gị ma ọ bụ ngwaọrụ bụ on.
Ugbu a gaa Ngwá Ọrụ na-emeghe configurations. Pịa na Audio na-eme ka n'aka na Kwado audio nhọrọ na-ticked. Gaa mmepụta ngalaba na-ahọrọ mmepụta mode ka Automatic. Nke a ga-ugbu a-akpọghachite ụda na gị VLC.
Tinye Video faịlụ ka VLC maka iOS na Wi-Fi Uploads
The Wi-Fi Bulite nhọrọ na-enye ohere onye ọrụ bulite-ejighi eriri videos ha iOS ngwaọrụ site na iji a Web nchọgharị si ha na kọmputa na otu netwọk Wi-Fi. Nke a na-eme ka ọ na ihe-adaba adaba n'ihi na ị na nyefee video s. Lee ndị nzọụkwụ.
1. Hụ ma gị na kọmputa na ngwaọrụ bụ na otu netwọk Wi-Fi.
2. Open VLC ngwa, na mgbe ahụ enweta on VLC na akara ngosi na top na-aga Wi-Fi bulite iji jide n'aka na nhọrọ bụ na.
3. Ugbu a, tinye adreesị IP na n'ọdụ ụgbọ mmiri ọtụtụ nke VLC nkesa na-agba ọsọ na gị iOS ngwaọrụ na adreesị weebụ gị na kọmputa. Ugbu a dị nnọọ pịa na bulite faịlụ ma ọ bụ ikpuru na dobe faịlụ gị.
Ozugbo bulite okokụre, ị pụrụ ịhụ uploaded faịlụ na gị VLC videos.
Nke a bụ otu nke mfe ụzọ na-agba ọsọ VLC na gị iOS ngwaọrụ. I nwekwara ike anya na ọzọ media Player na nwere ike igwu otu n'usoro nke dị iche iche faịlụ formats na ọbụna nwere ụfọdụ mmezi atụmatụ.
10 ihe mere i kwesịrị wụnye iOS 9 beta
Otú nyefee Data si iOS Devices ka Motorola ekwentị mkpanaaka na
Best iOS Photo Nyefee gaa na Import iOS Photos ka Computer
> Resource> iOS> Atụmatụ maka iji VLC na gị iOS System